वसन्त भिटामिनको कमीलाई कसरी समाधान गर्ने सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
वसन्त आएको छ। बिहान चराहरू विन्डो बाहिर गाउँछन्, तर यो उठ्न गाह्रो छ, र काम पछि त्यहाँ कुनै पनि कुराको लागि पर्याप्त शक्ति छैन। प्रायः त्यहाँ यस्तो भावना हुन्छ जुन भोली तपाइँ चिसोबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ प्रायः सुन्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँको नाखून फुट्न थाल्छ, छाला छाँट्नुहोस्, र तपाईंको कपाल खस्नेछ। चिडचिलोपन, नराम्रो मुड देखा पर्दछ, जीर्ण रोगहरू बिग्रन्छ, आदि। यी सबै माथि वसन्त भिटामिनको कमीका लक्षणहरू हुन्।
वसन्त inतुमा कसरी शरीरलाई सुदृढ गर्ने?
भिटामिनको अभाव एक अवस्था हो जहाँ शरीरमा पर्याप्त भिटामिन हुँदैन। प्रायः यसले प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पार्छ, जसले पछि गएर जीर्ण रोगहरूको बढ्दो अवस्थाका साथै विभिन्न भाइरल बिरामीहरूको उपस्थितिको उच्च सम्भावना पनि निम्त्याउँछ।
निस्सन्देह, यो निश्चितताका लागि कि यो अवस्थाले कुनै खतरनाक रोगको साथ गर्दैन, यो परीक्षणको लागि बेहतर छ। तर डाक्टरहरूले statistics 85% मानिसहरूलाई वसन्त vitaminतुमा भिटामिनको कमी भएको तथ्या .्क प्रदान गर्दछ।
तपाईले मल्टिभिटिम र खनिजहरूका विभिन्न जटिलहरूको सहयोगमा अवस्था सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तुरून्त फार्मेसीमा नजानुहोस् र ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुहोस्। तपाईं खानाको भित्तामा हरेक गृहिणीले राखेका उत्पादनहरूको सहायताले शरीरमा भिटामिनहरूको आपूर्ति पुनःपूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ।
वसन्त Vitaminतुमा भिटामिनको कमीले - डेकोक्शनले मद्दत गर्दछ
पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यक मात्राको साथ शरीरलाई संतुष्ट गर्नुहोस्, तपाईं पेय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा, यो एक गुलाब ब्रोथ, सुख्खा फल कम्पोटे वा भाइभर्नम जामुन को infusions संग चिया र कफी बदल्न राम्रो छ।
विभिन्न तरकारी र फलफूलबाट ताजा तयार गरिएको रस उपभोग गर्न शरीरको लागि यो धेरै उपयोगी छ। कताई पछि यो पन्ध्र मिनेट को लागी पिउन आवश्यक छ। तसर्थ, भविष्यको रसको लागि गर्नु पर्दैन।
जडिबुटी तयारीमा विटामिनहरू धेरै छन्, तिनीहरूले वसन्त भिटामिनको कमीसँग सामना गर्न मद्दत गर्छन्। तलका व्यंजनहरू राम्रोसँग मद्दत गर्दछन्। लिंगोनबेरी, नेटल पात र गुलाब हिपहरू समान मात्रामा लिइन्छन्। त्यसपछि उम्लिएको पानी संग समाप्त मिश्रण डालो। एक गिलास पानीमा तपाईले २० ग्राम संग्रह लिनु पर्छ। थर्मसमा सबै चीज राख्नु राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईंले कम्तिमा चार घण्टा जिद्दी गर्नु पर्छ।
फिल्टर र पेय २०० मिलीलीटर पेय दिनमा तीन पटक सेवन गर्न सकिन्छ - भिटामिनको अभाव कम हुनेछ!
प्रिम्रोस घाँसको एक चम्मच उमालेको गिलाससँग thirty० मिनेटसम्म उमालेर राखिन्छ। हामी खाना र आधा घन्टा भन्दा before० मिलीलीटर पेय पिउँछौं।
भिटामिनको अभावले खाने के राम्रो छ?
वसन्त .तुमा खानालाई विशेष ध्यान दिन सकिन्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सबल बनाउने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण भिटामिन भिटामिन सी हो। यो सबै प्रकारको गोभी, हरियो प्याज, करन्ट्स, र सिट्रस फलहरूमा पाइन्छ। तर यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि तातो उपचारको समयमा यो भिटामिन नष्ट हुन्छ।
भिटामिन ए को अभावको साथ, शरीरको विकास सुस्त हुन्छ। गाजर र कद्दूमा भिटामिन एको एक धेरै पाइन्छ। यो प्रतिरक्षा प्रणाली को लागी महत्वपूर्ण छ, र छाला लाई राम्रो अवस्थामा राख्छ।
दिमागका लागि, तपाईंले माछा खानुपर्दछ। यी भिटामिन डी र स्वस्थ वसा हुन्। यो भिटामिन डेअरी उत्पादन, अण्डाको खोराहरूमा पनि पाइन्छ। यसले हड्डी, दाँत बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
एक अद्भुत प्राकृतिक antidepressant भिटामिन बी 1 हो। ऊ स्नायु प्रणालीको कामका लागि जिम्मेवार छ, मेटाबोलिज्म।
खाद्यान्न, फलफूल, मासु, पागलहरू मा प्रस्तुत। अखरोटमा धेरै भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन्।
पाचन सुधार गर्न, गोभीलाई आहारमा थप्न आवश्यक छ। यसले पोटेशियम, भिटामिन सी र पीपी, साथै प्राकृतिक फाइबर समावेश गर्दछ।
र प्राय: तपाई बाहिरि हुनु पर्छ, र घरमा टिभीको अगाडि नबस्नु। त्यसो भए वसन्त कमजोरी र भिटामिनको कमी डरलाग्दो हुनेछैन।
जडिबुटी वा अन्य उत्पादनहरूको डिकोक्शनहरू प्रयोग गर्नु अघि हामी कडा सल्लाह दिन्छौं डाक्टरलाई परामर्श!
काममा निद्राको साथ कसरी व्यवहार गर्ने: प्रभावकारी तरिका र सिफारिसहरू
बन्द कमोडोनहरू: तिनीहरू किन उठ्छन् र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने
फिर्ता सिंड्रोम। यो के हो र यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने?
पुरुषहरूको पछाडि मुँहासे: कसरी लड्न?
62 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,370 प्रश्नहरू।